5 Paakaona mapoka evanhu akakwira mugomo; uye agara pasi vadzidzi vake vakauya kwaari; 2 uye akashama muromo wake akatanga kuvadzidzisa, achiti: 3 “Vanofara vaya vanoziva zvinodiwa zvavo zvomudzimu,+ nokuti umambo hwokumatenga ndohwavo.+ 4 “Vanofara vaya vanochema, nokuti vachanyaradzwa.+ 5 “Vanofara vanyoro,+ nokuti vachagara nhaka yenyika.+ 6 “Vanofara vaya vane nzara nenyota+ yokururama, nokuti vachagutiswa.+ 7 “Vanofara vane ngoni,+ nokuti vachanzwirwa ngoni. 8 “Vanofara vakachena mumwoyo,+ nokuti vachaona Mwari.+ 9 “Vanofara vanoita kuti pave norugare,+ nokuti vachanzi ‘vanakomana+ vaMwari.’ 10 “Vanofara vaya vakatambudzwa+ nokuda kwokururama, nokuti umambo hwokumatenga ndohwavo. 11 “Munofara imi kana vanhu vachikuzvidzai+ nokukutambudzai+ nokukureverai zvenhema zvinhu zvakaipa zvemarudzi ose nokuda kwangu. 12 Farai musvetuke nomufaro,+ nokuti mubayiro wenyu+ mukuru kumatenga; nokuti vakatambudza vaprofita+ vakakutangirai saizvozvo. 13 “Imi muri munyu+ wenyika; asi kana munyu usisavaviri, kuvavira kwawo kuchadzorerwa sei? Hapana chinhu chauchashandisirwa kunze kwokuti urasirwe kunze,+ utsikwe-tsikwe nevanhu. 14 “Imi muri chiedza chenyika.+ Guta harigoni kuvanzwa kana riri pamusoro pegomo. 15 Vanhu havabatidzi rambi voriisa pasi pedengu rokuyeresa,+ asi pamusoro pechigadziko cherambi, uye rinovhenekera vose vari mumba macho. 16 Saizvozvowo chiedza chenyu+ ngachivheneke pamberi pevanhu, kuti vaone mabasa enyu akanaka+ uye vakudze+ Baba venyu vari kumatenga. 17 “Musafunga kuti ndakauya kuzoparadza Mutemo+ kana kuti Zvakanyorwa nevaprofita. Handina kuuya kuzoparadza, asi kuzozadzisa;+ 18 nokuti chokwadi ndinoti kwamuri nokukurumidza denga nenyika zvingapfuura,+ pane kuti bhii rimwe chete duku pane ose kana kuti kachikamu kebhii kapfuure paMutemo zvinhu zvose zvisina kuitika.+ 19 Naizvozvo, munhu wose anoputsa+ mumwe wemirayiro iyi miduku pane yose uye akadzidzisa vanhu kuita izvozvo, achanzi ‘muduku pane vose’ kana toreva nezvoumambo hwokumatenga.+ Asi munhu anoita zvainotaura oidzidzisa,+ iyeyu achanzi ‘mukuru’+ kana toreva nezvoumambo hwokumatenga. 20 Nokuti ndinoti kwamuri kana kururama kwenyu kusingapfuuri kuya kwevanyori nevaFarisi,+ hamungambopindi+ muumambo hwokumatenga. 21 “Makanzwa kuti zvakanzi kune vaya vomunguva yekare, ‘Usaponda;+ asi munhu wose anoponda+ achazvidavirira kudare rinotonga.’+ 22 Zvisinei, ndinoti kwamuri munhu wose anoramba akatsamwira+ hama yake achazvidavirira+ kudare rinotonga; asi munhu wose anoshevedza hama yake neshoko risingatauriki rokuzvidza achazvidavirira kuDare Repamusorosoro; uye munhu wose anoti, ‘Iwe zibenzi!’ achava akafanirwa neGehena romoto.+ 23 “Zvino, kana uchiuya nechipo chako kuatari+ wobva wayeuka uri ikoko kuti hama yako ine chigumbu newe,+ 24 siya chipo chako ipapo pamberi peatari, woenda; tanga waita kuti uve norugare nehama yako,+ uye kana wadzoka, ipa chipo chako.+ 25 “Kurumidza kugadzirisa nyaya nomunhu anokumhan’arira, paunenge uinaye muchienda kudare, kuti zvimwe munhu anokumhan’arira+ arege kukuisa kumutongi, uye mutongi kumushandi womudare, ukakandwa mujeri. 26 Chokwadi ndinoti kwauri, Iwe haungabudi imomo kuzosvikira waripira mari yokupedzisira isingambokoshi.+ 27 “Makanzwa kuti zvakanzi, ‘Usaita upombwe.’+ 28 Asi ini ndinoti kwamuri, munhu wose anoramba akatarira mukadzi+ zvokuti anomuchiva atoita upombwe+ naye mumwoyo make.+ 29 Zvino kana ziso rako rokurudyi iroro richiita kuti ugumburwe, ribvise urirasire kure newe.+ Nokuti zvinokubatsira kwazvo kuti urasikirwe hako neimwe nhengo yako pane kuti muviri wako wose ukandwe+ muGehena. 30 Uyewo, kana ruoko rwako rworudyi ruchiita kuti ugumburwe, rugure ururasire kure newe.+ Nokuti zvinokubatsira kwazvo kuti urasikirwe hako neimwe nhengo yako pane kuti muviri wako wose ukandwe muGehena. 31 “Zvakare zvakanzi, ‘Munhu wose anoramba+ mudzimai wake, ngaamupe rugwaro rwokumuramba.’+ 32 Zvisinei, ini ndinoti kwamuri, munhu wose anoramba mudzimai wake, kunze kwokunge aita ufeve,+ anomuisa pangozi yokuita upombwe,+ uye munhu wose anoroora mudzimai akarambwa anoita upombwe.+ 33 “Zvakare makanzwa kuti zvakanzi kune vomunguva yekare, ‘Usapika+ usingaiti, asi uripe mhiko dzako kuna Jehovha.’+ 34 Zvisinei, ini ndinoti kwamuri: Musambopika,+ kana nedenga, nokuti iro chigaro choumambo chaMwari;+ 35 kana nenyika, nokuti iyo chitsiko+ chetsoka dzake; kana neJerusarema, nokuti iro iguta+ raMambo mukuru. 36 Uyewo usapika nomusoro wako, nokuti haugoni kuchinja bvudzi rimwe chete kuti rive jena kana dema. 37 Shoko renyu rokuti Hungu ngaringova Hungu, Aiwa wenyu, Aiwa;+ nokuti zvinopfuura izvi zvinobva kune akaipa.+ 38 “Makanzwa kuti zvakanzi, ‘Ziso rinotsiviwa neziso uye zino nezino.’+ 39 Zvisinei, ini ndinoti kwamuri: Musadzivisa munhu akaipa; asi munhu wose anokurova nembama padama rako rokurudyi,+ umupewo rimwe racho. 40 Uye kana mumwe munhu achida kukukwirira kudare kuti akutorere nguo yako yomukati, rega nguo yako yokunze iendewo kwaari;+ 41 uye kana mumwe munhu ane simba akakumanikidza kuti uite basa kwemaira imwe chete, enda naye kwemamaira maviri.+ 42 Ipa anokukumbira, uye usafuratira anoda kukukwereta pasina mubereko.+ 43 “Makanzwa kuti zvakanzi, ‘Ida muvakidzani wako+ uvenge muvengi wako.’+ 44 Zvisinei, ini ndinoti kwamuri: Rambai muchida vavengi venyu+ uye muchinyengeterera vaya vanokutambudzai;+ 45 kuti muve vanakomana vaBaba venyu vari kumatenga,+ nokuti vanoita kuti zuva ravo ribudire vanhu vakaipa nevakanaka uye vachiita kuti kunaye pavanhu vakarurama nevasina kururama.+ 46 Nokuti kana muchida vaya vanokudai, mune mubayiro wei?+ Vateresi havasi kuita saizvozvowo here? 47 Uye kana muchikwazisa hama dzenyu chete, chii chamuri kuita chinoshamisa? Vanhu vemamwe marudzi havasi kuita saizvozvowo here? 48 Naizvozvo ivai vakakwana, nokuti Baba venyu vokudenga vakakwana.+